Imephu yeBentley PowerView V8i, ukuKhangela kokuQala- iGeofumed
Ndifumene inguqulelo yePowerView V8i Select Series 2 (Inguqulelo 8.11.07), umgca wezoqoqosho kwindawo yemephu uBentley anethemba lokuyisebenzisa. Ekuqaleni, amanye amathandabuzo am aphelisiwe emnyango yangaphambili xa ndibonisa imigca emithathu yendawo ye-geospatial ye-2011.
Kwabaqalayo, endaweni yokuba inguhlobo olulinganiselweyo, inezinto ezininzi ezinokubakho. Kuyindida ke ngoku ukuba kubiza ngaphantsi kwe-US $ 1,350; Kungenxa yoko le nto ndicinge ukuba iya kuba namandla asezantsi kunePowerMap Select Series 1 ejikeleze iUS $ 1,495. Kuyacaca ukuba iBentley ifuna ukuzisa le nguqulo kwintengiso njengesixhobo esinexabiso eliphantsi, kubandakanya amandla e-Bentley Map nawo onke amandla eMicrostation kwilayisensi enye. Kubiza kakhulu kune Microstation kuphela.
Ngale nto, into ayenzileyo kukwenza ngokwahlukileyo umahluko wenguqulo elandelayo (iMephu yeMephu V8i) equka izixhobo ze-cadastre kunye neMephuScript -Le iya phantse kwi-US $ 4,000-. Kumatyala amaninzi atshaywayo, i-Bentley Map Enterprise ishiywe ngaphezulu kwe-US $ 7,000 ngokwetshathi yokuthelekisa eyenziwe nguBentley esidlangalaleni.
Ukuze iPowerMap Select Series 1 izokuma ngxi apho, iya kuqhubeka nokuthengisa ngokungenantsingiselo ukuba iPowerView Select Series 2 yomelele ngakumbi kwaye inexabiso elincinci. I-PowerMap Field kunye nabasebenzisi bePowerDraft baya kubona ezona zibonelelo ngokubhekisele kwizixhobo zokuhlela,
Kule mifanekiso ilandelayo ndibonisa umahluko phakathi kwephaneli yesiqhelo yomsebenzi weMicrostation neBentley PowerView. Zonke izixhobo zeMicrostation zokwakha, ukuhlela nokuqamba ubeko zezi; apho yahluke khona -jonga iphaneli yasekhohlo-Izixhobo zokwenza oopopayi, ukubonwa kwangaphambili, imodeli ye-3D kunye nomphezulu azifakwanga; Ungabona i-3D kodwa ezi zixhobo azizi kwimeko yeenguqulelo ezipheleleyo ezenziwa yiMephu yeBentley.
Imephu yeBentley ibandakanya zonke izixhobo zohlalutyo, ngaphandle kwesikripthi, uhlalutyo lomhlaba kunye nohlalutyo lwenethiwekhi. Ngokubhekiselele ekusebenzisaneni, akubandakanyi izandiso FMEKwakhona ukuthunyelwa ngaphandle kweefomathi ze-GIS kuncitshisiwe, kuphela kwiifomathi zikaGoogle noMhlaba weCAD. Ingabambelela kwindawo yogcino lwedatha ye-Oracle, kodwa kuphela kufundo, ukuphathwa kweetopiki ngaphakathi kwe-Oracle okanye ukufakwa kwedatha kushiywe ngaphandle; ayinako ukuvelisa I-imizekelo Nangona ungazifunda.
Ngokuphuculwa, izixhobo zibandakanyiwe ukwenza uphononongo kunye neMarkup (ezi zikhona kuphela kule layisensi) into efanayo naleyo yenziwe ngaphambili nge-Redline kodwa ngokubanakho okungaphezulu, kunye nesixa sokuphuculwa ngokubanzi okuchazwe kuThotho 2 Kule nqanaba leenguqulelo, i-thumbtack sele ifakiwe ukulungisa iphaneli okanye ukuyithumela njengethebhu ngasekhohlo, njengeRibbon ye-AutoCAD.
Imephu yeVenkile yeMephu yeVenkile yeVenkile Ukukhetha iNqaku 2 (8.11.07)
I-Microstation V8i Khetha iNqaku 1 (8.11.05)
Ukungancedi kwe-PowerView V8i
Eyona nto ithandazayo kukuba ayizibandakanyi izixhobo ezisisiseko zokwakha iimephu, ngakumbi ukucocwa komhlaba, umvelisi wegridi kwaye ixhasa kuphela i imodeli (Kuluhlu) ngu-dgn. Ndikufumanisa kuyinto embi ukuthatha le nto kubasebenzisi abaqhelekileyo abanelayisensi yePowerMap V8i kwaye abafuna ukuthenga enye ilayisensi ngaphandle kokuya kwinqanaba elilandelayo lokufumana ilayisensi.
Nangona kunjalo, akukho nto ayinakuconjululwa ngumntu owaziyo ukuya kwi-Microstation:
Umzekelo, ungavumeli ukuba kudalwe ngaphezulu kwesinye imodeli, kodwa ayithinteli ukuphinda enye esele ikhona, esombulula loo meko ngokunqakraza ekunene nokukhetha ukuphinda.
Emva koko, ngokungabandakanyi ukucocwa kwendalo, kuya kufuneka ukope kuphela iifayile kucocwa.ma kunye nokucoca.dll ukusuka kwi-PowerMap V8i kwidilesi:
C: \_ Iifayile zeNkqubo \_ Bentley \_ ImephuPowerView V8i \_ Imephu yePowerView \_ mdlsys \_ igqityiwe
Kwaye ukuyenza, kubhalwe kuphela kwilayini yomyalelo ye-keyin: MDL SILENTLOAD CLEANUP
Ke ungoyiki, kuba konke enako zizinto ezingasebenziyo ezivela kwimenyu yeebar kunye nee-mdls ezingabandakanywanga. Ukuphumelela okukhulu kubo bonke kukuba endaweni yeenguqulelo ezininzi ezikhoyo (Imephu, uyilo, iFilda, iCadastre, iSkripthi) ngoku yenziwe lula kwizikhuselo ezintathu kwindawo ye-geospatial kwinqanaba ledesktop.
Kubahlobo abafuna ukugcina iinguqu zeMicrostation V8 2004, ingcebiso kukufuduka. Ayenzi ngqondo kangako ukuhlala nesixhobo ixesha elide nangona ifomathi ye-VN V8 ihlala injalo. KwiBeTogether kaMeyi ka-2011 uBentley ubhengeze iindaba ngokunxibelelana neMicrosoft kodwa phakathi kwemigca eqinisekisiweyo ukuba iya kugcina inkxaso yezi nguqulelo kude kube ngo-2014, unyaka uMicrosoft oza kuyisusa yeWindows XP.
Kubonakala kum ukuba le nguqulo iya kuba yenye yezona zisetyenziswa kakhulu yiCatastros ekhethe iMicrostation, ekhetha i-CAD eyenza iGIS, ixabiso layo kunye neXFM enokubakho. Nangona kunjalo, umceli mngeni weBentley uhlala unje kulo mgca: Yenza iiphaneli ezinobuhlobo zoMlawuli weGeospatial, eyona nto ndiyibonileyo yokwakha iindawo zeXML zeeprojekthi zemephu kodwa enesithintelo esenza ukuba ingathandeki kubasebenzisi abangazi iJografi .
Post edlulileyo«Ngaphambilini eGeomate ukukhululwa esemthethweni!
Post Next Kubonakala ngathi ingxaki yeHonduran iphelileOkulandelayo »
2 Uphendula "Bentley Imephu PowerView V8i, umbono wokuqala"
Molo uMarcos. Akukho software yeLaptopx yeLinux
UMarcos Quintanilla uthi:
Molo ubusuku obuhle, bendisebenza kwi-cadastre ye-5 iminyaka, saqeqeshwa yi-Spanish Cooperation, ndine-Bentrey PowerMapV81 imephu yoyilo lwesoftware kodwa iyahambelana neWindows kwaye ndisebenzisa inkqubo yasimahla yokusebenza kule meko iyi-Linux nohlobo olo. Ukusuka Ubuntu endikufunayo ukuba kukho inguqulelo ehambelana nale nkqubo yokusebenza yasimahla, enkosi kakhulu.